helical, bevel, worm, planet planet ၏ဂီယာအုံအမျိုးအစား
Industrial Gearboxes & Transmissions Speed ​​Reducers ထုတ်လုပ်သူများသည်စွမ်းအားမြင့် Torque ဖြင့်တရုတ်မှထုတ်လုပ်သည်။
ဂီယာအုံများနှင့် Geared Motors Manufacturing
Helical Worm GeareD Motors၊ Cycloidla Geared Motors၊ DC Geared Motors နှင့် Helical ဂီယာမောင်းစနစ်၏အပြည့်အဝလိုင်းဖြစ်သည်။
အလွန်အမင်းမြင့်မားသော torque ဂီယာမော်တာသည်တရုတ်၏ကျော်ကြားသောထုတ်လုပ်သူ Sogears Group မှဖြစ်သည်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များသည် Premium Motor ထုတ်ကုန်များ၊ ac motor များ၊ feature brake ပါသော dc မော်တာများ၊
ကျွန်ုပ်တို့တွင် Electric Motor Warehouse (အဆင့်သုံးဆင့်၊ အထွေထွေရည်ရွယ်ချက်အထွေထွေသုံးစက်မှုဇုန်သုံးမျိုး) အတွက်အမျိုးအစားများရှိသည်
တရုတ်စွမ်းအင်ထုတ်လွှင့်မောင်းနှင်မှုဖြေရှင်းချက်နည်းပညာ၏ ဦး ဆောင်ကုမ္ပဏီ
အမြင့်ဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်အတူ Gearmotors & Industrial Gear Units များသည်အရွယ်အစားနှင့်ဂီယာအချိုးအစားများစွာဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့အတိအကျမှန်ကန်သောဖြေရှင်းချက်ကိုဆက်ကပ်။
Sogears ထုတ်လုပ်သူသည်နှစ်ပေါင်း (၂၀) ​​ကျော်ဂီယာမော်တာနှင့်လျှပ်စစ်မော်တာထုတ်လုပ်မှုကိုအထူးပြုလုပ်သည်။ လူကြိုက်အများဆုံးထိပ်တန်း 20 တရုတ်ထုတ်လုပ်သူရောင်းရန်အတွက်မော်တာ reducer ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စက်မှုဂီယာအုံ၏လယ်ပြင်၌နေသော။ တရုတ်နိုင်ငံသည် Geared motor ထုတ်လုပ်သူ၊ ဂြိုဟ်များ၊ worm ဂီယာ၊ helical gear နှင့်အခြားသောအခြားလျှပ်စစ်မော်တာများကဲ့သို့သောဂီယာအမျိုးအစားများကို sogears ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသော်လည်းပြိုင်ဆိုင်မှုရှိသောစျေးနှုန်းများကိုထောက်ပံ့ပေးနေသည်။ လျှပ်စစ်မော်တာစျေးနှုန်းများ၊ အခြားလျှပ်စစ်မော်တာထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဂီယာလျှော့စျေးရောင်းသူများထံမှဂီယာမော်တာစျေးနှုန်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြောင်းသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။ AC အနိမ့်မြန်နှုန်းဂီယာမော်တာများ, DC ဂီယာမော်တာ, မော်တာလျှော့။ ၎င်းကိုတရုတ်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း၊ ရောင်းရန်ရှိသောအထွေထွေရည်ရွယ်ချက်များစက်မှုဂီယာအိတ်များနှင့်ရောင်းရန်အဆင့်သုံးဆင့်သို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းသောလျှပ်စစ်မော်တာများ၊ အမြန်နှုန်းလျှော့စက်ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်ကမ္ဘာသို့ Electromotors၊ Worm Geared Motor အတွက်တင်ပို့သည်။
ရောင်းရန် Gear Motors
DC ဂီယာမော်တာ၊ ac ဂီယာ၊ တီကောင်ဂီယာ၊ ဂီယာလျှော့ချသောမော်တာ၊ ဂီယာအုံပါသည့် 24v DC မော်တာ၊ မော်တာလျှော့ချစက်၊ ဂီယာငယ်၊ ညာထောင့်ဂီယာမော်တာကိုထုတ်လုပ်သည်
အကောင်းဆုံးဂီယာအုံစျေးနှုန်း၊ ဂီယာအုံအမျိုးအစားများ၊ ရောင်းရန်စက်မှုဂီယာအုံ၊ ဂြိုဟ်များ၊ တီကောင်မောင်းဂီယာအုံ၊ helical gear, ထောင့်မှန်ဂီယာ၊ လျှပ်စစ်မော်တာဂီယာအုံ
လျှပ်စစ်မော်တာထုတ်လုပ်သူ၊ ရိုးရိုးလျှပ်စစ်မော်တာ၊ ရောင်းရန်လျှပ်စစ်မော်တာများ၊ ac မော်တာ၊ dc မော်တာ၊3phase motor, 2hp လျှပ်စစ်မော်တာ၊ single phase လျှပ်စစ်မော်တာ၊
Helical ဂီယာ၊ Spiral bevel ဂီယာ၊ Bevel ဂီယာ၊ Bevel ဂီယာမော်တာ၊ Helical Gear Motors, Spiral Bevel Gear Motor
Helical ဂီယာ၊ Worm ဂီယာ၊ Worm ဂီယာ၊ Helical Gear Motors
Helical ဂီယာ၊ Bevel ဂီယာ
Cycloidal ဂီယာ၊ Cycloidal Gear Motor
သူတို့ ၁၀ နှစ်နီးပါးပေးခဲ့တဲ့အနိမ့်ဆုံးဈေးနှုန်းကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်။ နှင့် helical ဂီယာအုံများတိတ်ဆိတ်စွာပြေးနှင့်အေးမြရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဂရိတ်ထုတ်ကုန်ကောင်းသောအဘယ်သူမျှမတန်ပြန်လုပ်! ငါလုံးဝအသင်းကိုချီးမွမ်းရမယ်၊
သူတို့ကငါတို့စက်အတွက်အင်ဂျင်နီယာတွေအများကြီးကူညီပေးဖို့ငါတို့ကိုကျွမ်းကျင်တယ်။ Sogears အုပ်စုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက်အလွန် ၀ မ်းသာပါသည်။ ၎င်းတို့မှထုတ်ကုန်အားလုံးသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်၊ ယိုစိမ့်မှုမရှိ၊ နောက်ဆက်တွဲများမရှိ၊ shimmies များပိုမိုမြန်ဆန်သောအချိန်၊ ပိုမိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်ရေကြောင်းသွားလာမှုလမ်းနှင့်အရေးအကြီးဆုံးအရည်အသွေး၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါသူတို့ငါတို့ထံမှအကောင်းဆုံးပေးသွင်းဖြစ်ကြသည်ထင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်ထင်သည်မှာအရေးအကြီးဆုံးမှာသူတို့၏ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ဖြစ်ပြီးလျင်မြန်ပြီးထိရောက်မှုရှိပါသည်။ transmission ကျွန်ုပ်တို့ပို့လွှတ်သည့် drive နှင့် ပတ်သတ်၍ မေးခွန်းများမေးတိုင်း၎င်းတို့အားမေးမြန်းပြီးမိနစ် ၃၀ အတွင်းတုံ့ပြန်လိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါတယ်, အီးမေးလ်ဖြင့်! WhatsApp ကိုငါတို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်နည်းသွားမှာပါ။ ဒါကြောင့်အတိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ငါတို့လိုအပ်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်ကြားချက်ဖြစ်တယ်၊ သူတို့ကငါတို့ရှာဖွေနေတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တယ်။
ငါတို့အဖွဲ့သည် Sogears ကုမ္ပဏီသို့လာရောက်လည်ပတ်သည်။ အထူးသဖြင့်အရောင်းအင်ဂျင်နီယာ Lance အတွက်အလွန်စိတ် ၀ င်စားသောဖောက်သည်များ၏ထောက်ခံမှု၊ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီး Sogears Only ကိုငါကြိုက်တယ်။ သူတို့ကိုငါနာမည်ကောင်းမပေးပေမယ့်သူတို့ထိုက်တယ်။
09 စက်တင်ဘာလ 2021
1.5hp 10hp 20hp 30hp 75hp သုံးအဆင့် induction လျှပ်စစ်မော်တာ
AC မော်တာစက်ရုံမှ 380v 50Hz 60Hz3phase asynchronous
လျှော့ချဂီယာ၊ ဂီယာမော်တာပါသော 1rpm လျှပ်စစ်မော်တာ